Xarakada Alshabaab "Muqdisho waxaan ugaga baxnay Xeelad Dagaal" – SBC
Xarakada Alshabaab "Muqdisho waxaan ugaga baxnay Xeelad Dagaal"
Ka dib dagaal xoogleh oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa magaalada Muqdisho isaga baxay goobihii ay kaga sugnaayeen xoogaga xarakada Shabaab Almujaahidiin, iyadoo ay saaka aheyd markii mar qura la arkay goobihii ay ku sugnaayeen xoogagaasi oo hawanaya.
Inkastoo ay hadalo ka soo kala saareen labada dhinac ee DKMG ah iyo Xarakada Alshabaab arinkan ayaa hadana waxaa jira in ay xaqiijinayaan dadka rayidka ah in habeenimadii xalay ay maqlayeen guuxa gawaarida dagaalka oo iyaga isaga sii baxaya magaalada Muqdisho.
Waxaa sidoo kale goobaha ay faarujiyeen xarakada Alshabaab isla maanta qaarkood gaaray ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya, inkastoo ay si taxadar leh u gaarayaan goobahaas, waxaase jira in saraakiisha sar sare ee dowlada KMG ah iyo Masuuliyiintaba in dadweynaha Muqdisho ay ugu baaqayaan in aanay u dhowaan fariisimadii ay ka bexeen xoogagii xarakada Alshabaab, maadaama laga yaabo in goobahaas ay ku jiraan waxyaabaha qarxa sida ay hadalka u dhigeen.
Madaxweynaha Dowlada KMG ah Shariif Sh Axmed ayaa ka mid ahaa masuuliyiintii digniinta u jeediyay shacabweynaha isagoona sheegay in goobahaasi ay u diri doonaan saraakiil aqoon u leh waxyaabaha qarxa, ka horna ay iska ilaaliyaan shacabka in ay u dhowaadaan goobahaasi.
Xarakada Shabaab almujaahidiin ayaa afhayeenkooda Sh Cali dheere oo saxaafada hadal siiyay waxa uu sheegayin sababaha ay isagaga bexeen magaalada Muqdisho ay tahay xeelad dagaal iyo qorsheyaal ay ku doonayaan in ay kaga guuleystaan sida uu hadalka u dhigaye kooxo uu ku tilmaamay gaalo taas oo uu ula jeeday ciidamada DKMG iyo kuwa Amisom.
Inkastoo aan la oran Karin magaalada Muqdisho dhamaan waxaa gacanta iminka ku haya Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa hadana waxaa jirta in inta ay ku suganyihiin ciidamada DKMG ah maahee inta kale ay tahay goobo aan cidna kusugneyn oo cidlo ah .
Sikastaba ha ahaatee madaxda sar sare ee dowlada KMG ah ee SOomaaliya ayaa arinkan ku sheegay jab xoogleh oo so gaaray dhinacyadii la dagaalamayay waa xarakada Alshabaabe iyagoona sheegay in taasi ay tahay guul ay dowlada KMG ahi gaartay .